Nonius संग Goniometers: सिंहावलोकन लागि प्रयोग, वर्णन, प्रकार र समीक्षा निर्देशन
निर्माण को पूरा कोठा मा काम गर्दछ मा सबै पूर्ण र सजिलै पर्दैन। यो धेरै समय प्राप्त भएको छ। को भित्री थुप्रै तत्व सीधा पर्खालहरु र कुनामा मा स्थापना गरिनु पर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाईं एक साधारण कुना स्नान लाग्न सक्छ। बिल्डर अधिकार कोण खडा गर्दैन भने, यो पर्खाल र बाथरूम बीच अनावश्यक अंतराल हुनेछ। तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न, तपाईं पनि मात्र होइन समय तर पनि पैसा खर्च गर्नुपर्छ। यो कोणमापक यी प्रक्रियाहरू नियन्त्रण गर्न डिजाइन गरिएको छ।
Vernier goniometers प्रयोग गरिएको विभिन्न डिजाइन मा ज्यामितीय कोण नाप्ने लागि। यो उपकरण यांत्रिक पर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा तपाईं रिमोट संरचना संग काम पूरा गर्न सक्ने छ। तपाईं के गर्न आवश्यक सबै - एक अप्टिकल विधि प्रयोग गरेर सही स्थिति मा उपकरण समाधान गर्न। मापन परिणाम छ, को पाठ्यक्रम, डिग्री देखाइएको छ। थप तराजू प्रयोग मार्फत थप सही संकेतक हो। यो उपकरण पारंपरिक elongate लाइन छ जो एक Vernier मात्रा प्रयोग गर्दछ। यो डिग्री को पनि सानो अंश निर्धारण गर्न सकिँदैन, उनको मार्फत छ। यो सुविधा उच्च हासिल गर्न मद्दत गर्छ शुद्धता विभिन्न क्षेत्रहरू।
त्यहाँ यांत्रिक धेरै प्रकार हो नाप्ने उपकरण। ती सबै, नियम, धातु को छन्। प्रत्येक प्रजाति अघिल्लो एक देखि व्यावहारिक कुनै फरक छ। तिनीहरूले मात्र डिजाइन सुविधाहरू, साथै मात्रा को आकार र सजावट फरक हुन सक्छ। त्यो एक नियमित कोणमापक छ, तर यो सधैं सही रूप छैन। यसको संलग्न धातु शासक, को झुकाव कोण नियन्त्रण गर्न गर्दछ जो, र measurand को परिभाषा को बीचमा। जहाँ लाइन उपकरण को मात्रा संग प्रतिच्छेदन मात्रा Vernier स्थित छ।
nonius संग Goniometers: प्रकार
कोणमापक विभिन्न भागहरु को बाहिरी कुनामा मापन गर्न डिजाइन जो5प्रकार, विभाजन गरिएको छ। आफ्नो डिजाइन कुनै पनि सतह मा काम अंकन लागि अनुमति दिन्छ। Vernier GOST 537 888 संग प्रत्येक goniometer नै शुद्धता वर्ग छ। मात्र फरक मात्रा को काम दायरा छ। उदाहरणका लागि, नाप्ने उपकरणहरू को सबै प्रकार0180 मा ° देखि दायरामा सञ्चालन सक्षम छन्। केही साना त्रुटिहरू हुन सक्छ। nonius प्रकार2Goniometer बाहिर0देखि 360 डिग्री गर्न दायरामा बाह्य आयाम संग सञ्चालन बोक्न सक्छ। यो प्राविधिक उपकरण एउटा सानो आकार र वजन छ। त्यसैले, यो हस्तान्तरण र अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक धातु शासकको सकारात्मक सुविधाहरू एक predetermined कोण नाप्ने द्वारा, सीधा मापन वस्तुहरू वा संरचना को अंकन सतह लागू गर्न सकिन्छ, कि छ। सञ्चालन समय लाइन कसरी प्रयोग गर्नेछ (यो धातु बनेको छ भनेर याद) मा निर्भर गर्दछ। goniometers को सबै भन्दा साधारण प्रकार-पीए4र पीए-5 छन्। हामीलाई तल हेरौं।
संग nonius प्रकार उम-4 Goniometers सबैभन्दा सरल र सबै को सही छ। साथै, यो सस्ता लागत छ। यसको संरचना जसद्वारा उपकरणको सञ्चालन एकदम लामो समय छ उच्च-बल धातु, बनेको छ।
कोण मापन गर्न, एक रैखिक मात्रा एक परिपत्र आकार भइरहेको प्रयोग गरिन्छ। Vernier लाइन अन्तर्गत स्थित छ। विद्युतीय उपकरणहरू यी प्रकार उपलब्ध छैन। कोणमापक प्रकार4मानक मोडेल, जनसंख्याको बीचमा यति व्यापक छ। यसलाई0180 मा ° देखि दायरामा माप प्रदर्शन गर्न सक्छन्। नियम, जहाँ विभिन्न भागहरु छन् उद्योग, प्रयोग र आफ्नो मरम्मत आयोजित मापन उपकरण को यस प्रकार।
विभिन्न भागहरु को बाह्य कोण को Vernier मापन लागि 5UM संग Goniometer। यसको काम दायरा अर्थात् अघिल्लो प्रजाति फरक छैन, यसलाई0180 मा ° हो। कुल5मिनेट को मापन मा सहिष्णुता। Goniometer 5-पीए सानो आयाम र तौल छ, त्यसैले यो एक मोबाइल उपकरण हो। अक्सर अंकन काम गर्न प्रयोग उद्योग र फलस्वरूप, फरक विवरण को निर्माण। जसको मूल्य जनसंख्याको बीचमा लोकप्रिय बन्ने 6000 rubles छ nonius, संग Goniometers।
नाप्ने यन्त्रको सकारात्मक पक्ष
goniometers को मुख्य लाभ संकेतक को दहाई पुग्न एउटा उच्च वर्ग सटीक छ। धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरु मा उपयोगी छन् कि गुणस्तर र सटीक संकेतक प्राप्त गर्न सक्छन् एक Vernier प्रयोग गर्दा। कारण यो सम्पत्ति, थप र थप व्यवसायीक कोणमापक यस प्रकारको छनौट छन्। साथै, यो टिकाउ उपकरण धातु को गरेका छन् छ।
नकारात्मक पक्ष रूपमा, तपाईं सबै विवरण जटिल हुन्, मरम्मत को कठिनाई चयन गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई राम्रो हार्ड प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। यो पनि विशिष्ट भण्डारण अवस्था आवश्यक छ। हाल, धेरै व्यवसायि, डिजिटल संस्करणहरूमा सार्दै हुनत मार्गदर्शन पनि प्रयोग गरिएको छ।
Vernier एक goniometer कसरी प्रयोग गर्ने?
यांत्रिक कोणमापक - निर्माण वा विभिन्न भागहरु को निर्माण मा एक साधारण उपकरण हो। थप मात्रा संग, तर पनि यो बिना मात्र होइन प्रमाण विचार माप कार्य गर्दा। मुख्य फरक त्रुटि हुनेछ। पहिलो मापन विधि धेरै सजिलो छ, त्यसैले तपाईं एक इच्छुक विशेषज्ञ हो भने, उहाँले सिद्ध छ। पूरा गर्न nonius संग Goniometers प्रदर्शन गर्न अनुमति यदि प्रक्रिया कुनै पनि सतह मा हुन सक्छ थाल्छन्। यो काम गर्न सक्छन् दुवै बाह्य र आन्तरिक कोण संग।
पहिले तपाईं नाप्ने यन्त्र को उपयोगिता को सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अर्को, शून्य मा लाइन सेट र यसलाई लक। यसलाई कुनै पनि आन्दोलनहरु प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। यदि यो हुन्छ, त्यसपछि नाप्ने समस्या को प्रक्रिया उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, यो एक नयाँ उपकरण प्रतिस्थापन गर्न राम्रो छ। एउटा सुरुवात विन्दु रूपमा हामी तल्लो सतह लिन। त्यसपछि तपाईं आवश्यक छ कि सतह साथ यो फ्याँक्नुहोस्। goniometers केहि प्रकारको थप जोड यी उद्देश्य। अब, बिन्दु को इच्छित सीमा बारी र एकाइ दिइएको कोण मा कति डिग्री संकेत हुनेछ। धातु शासक मापन लागि मात्र उपयुक्त छ, र तपाईं अंकन लागि फरक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ।
दोस्रो विधि को सार थप तराजू प्रयोग छ। उदाहरणका लागि, एक निश्चित संकेत रेकर्ड भयो। अब तपाईं लाइन सेट र Vernier विभाजन गणना गर्न आवश्यक छ। यो कसरी गणना गरिन्छ? यो मात्रा मा पहिलो लाइन शून्य चिन्ह अर्थात् थप otpravitelnoy विन्दु हो। यो मापन कोण को लाइन संग एकै समयमा पर्नु हुँदैन। 35º देखाइएको कोणमापक मूल्य मान। को Vernier मात्रा मा पाँचौ सुविधा संख्या4तसर्थ, मापन कोण पढिरहेको छ 35,4º पारस्परिक रहेको छ।
आज पनि सोभियत संघ समयमा गरियो जो nonius, धेरै प्रयोग Goniometers। निस्सन्देह, लोकप्रियता र आधुनिक उपकरण प्राप्त। त्यहाँ धेरै, मात्र होइन विदेशी तर पनि घरेलू यस्तो नाप्ने उपकरणहरू को विकास र निर्माण मा लगे उत्पादकहरु छन्। विदेशी कम्पनीहरु प्रमुख एक इटालियन दृढ IDF, साथै जापानी कम्पनी Mitutoyo छ। "कैलिब्रे" घरेलू निर्माताहरु बीचमा प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ। ग्राहक समीक्षा आयात र रूसी सामान बीच मापन शुद्धता र प्रदर्शन विश्वसनीयता मा फरक त्यहाँ दर्शाउन। त्यसैले यसलाई घरेलू किन्न अर्थमा बनाउँछ।
nonius संग Goniometers निर्माण र विभिन्न भागहरु र संरचना को निर्माण मा एक अपरिहार्य उपकरण हो। तिनीहरूले ती कारीगरों अंकन विमानहरु संग काम गर्ने गर्न उपयोगी हुनेछ। वर्तमानमा, तपाईं प्रत्येक जो यसको आफ्नै विशेषताहरु छ एक विशाल यस्तो साधन को, नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। एक मापन गर्न, तपाईं माथि विधिहरू को एक प्रयोग गर्नुपर्छ। रूपमा यो Vernier सँग कुनै विशेष समस्या आवश्यकता छैन पहिलो, कला मा शुरुआती लागि सिद्ध छ। यस्तो उपकरणहरू विभिन्न भवन सतहहरु मा प्रयोगको अनुमति दिन्छ जो एउटा सानो आकार र वजन, छ। यस्तो उपकरण लागत 5000-7000 rubles छ। यो नाप्ने यन्त्र प्रकार र क्षमता मा निर्भर गर्दछ। यसको धेरै सकारात्मक Goniometers nonius लाभ जनसंख्याको बीचमा उच्च लोकप्रियता संग गुणहरू, संग।
विवेक के हो? सर्किट तोडने को चयनात्मकता को गणना
भुइँमा टाइल्स आरामदायक घर सिर्जना
फल आहार: के सबै भन्दा राम्रो छ
समूह "मेज": रचना र इतिहास